Kedu Ka Mmetụta Weebụ dị na Ntanetị maka Mmasị Ọdịnihu? - Nchegbu nke ọkachamara
Maka azụmahịa ọ bụla n'ịntanetị, ịbịaru ndị ahịa na-aga n'ihu n'igwe bụ isi ihe na-akpata na e mepụtara mkpokọta weebụ. Site na Search Engine Optimization (SEO), ike nwere ike idozi ọnụnọ siri ike ma dị mma na ntanetị. Ihe oyiyi nwere ike iru ọtụtụ mmadụ ka ụlọ ọrụ ahụ ruru ọtụtụ ndị ahịa. N'ihi ya, ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ na-elekwasị anya n'ọkwá dị elu na engines ọchụchọ maka ụfọdụ okwu bụ isi na-abụghị nanị na niche ha. Ihe ịga nke ọma nke usoro a ga-ekwe omume site na SEO. Ọ na-agụnye ihe ndị dịka ọchụchọ ọchụchọ, mgbasa azụ na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Kemgbe Jenụwarị 2017, SEO agbanweela nwayọọ nwayọọ. Dịka ọmụmaatụ, ma e wezụga isiokwu, Google na-elekwasị anya ugbu a maka ọdịnaya dị mkpa, mmekọrịta enyi na ntanetị nke imewe, ọdịnaya dị mma na atụmatụ imewe weebụ. Maka onye na-eme SERP algorithm iji bulie ha, ha ga-elekwasị anya naanị na ahụmịhe ọrụ n'oge oge nchọgharị. Mmetụta obi ụtọ na mmetụta mmadụ nwere mgbe ha pịa njikọ gị na-emetụta mkpebi ha ma ị ga-azụta na saịtị gị ma ọ bụ hapụ ntụgharị ọchụchọ dị iche. Ya mere, ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ na-agbaso atụmatụ nhazi weebụ dị mma bụ ihe ga-enwerịrị maka ịntanetị ahịa.
Iji nweta ọkwa dị mma, onye ahịa ahịa Success nke Ọcha , Ọrụ Digital, Alexander Peresunko, kwadoro ihe ndị a:
Nka na ụzụ nke weebụsaịtị
Otu weebụsaịtị ga-arụ ọrụ nke ọma na nhazi na nchịkọta ya. Ezi saịtị ekwesịghị inwe nsogbu na nchinchi..Ngwakọta ngwugwu ga-enwe bandwit zuru oke maka ezigbo nzaghachi na ọsọ. Na Jenụwarị n'afọ a, Google na-achọ ka ebe nrụọrụ weebụ ga-eme ka enyi ha nwee ike ịkwado ha na ibe SERP.
SEO na -eme ka ịmepụta ihe dị ike. Onu ogugu Google di nma site na ogo. Nhọrọ nke isiokwu na nkọwa nke ọdịnaya gị na-ekwusi ike na ọnọdụ ahụ ga-edobe na SERPs. Ihe ọ bụla ị biputere na - anọchi anya akara ahụ ị na - agbalị ime ka ọ bụrụ nje.
Ihe nhazi nke mkpokọta weebụ bụ naanị otu nzube nke mmepe weebụ. Onye ọrụ nchịkọta Google na-eche echiche site na ihe ndị dị otú ahụ. A ghaghị ịrata mmadụ mgbe ha gara na saịtị gị. Ihe ngosi ahụ na-eme ka ndị mmadụ gbanwee site n'ịtụgharị ndị ọbịa na ndị na-azụ ahịa. Nhazi ahụ kwesịrị inye onye ọbịa gị ohere dị mfe ma duzie ha site na ịzụta ma ọ bụ ndenye aha.
Otu i si etinye ọdịnaya yana bọtịnụ pụrụ iche dịka ọrụ Nrụgharị-Ọrụ na-atụnye ụtụ na ahịa ị na-eme. Mfe nke igodo igodo na-enyere aka na-esi enyere ndị ahịa aka ịmata ihe ha na-achọ. Onye ahịa ekwesịghị ịnwe oge siri ike ma ọ bụ nwee nsogbu ọ bụla mgbe ị na - agagharị.
Dị ka onye na-azụ ahịa, mmepe weebụ nwere ike ịmetụta ọtụtụ usoro ahia dị ka SEO. Ngosipụta obi ụtọ na-amasị onye ọbịa na-eche na ebe nrụọrụ weebụ gị nwere mmetụta dị ukwuu na ma ha ga-azụ azụta, ma ọ bụ na ha agaghị eme ya, na-ebuli ibe weebụ gị. Maka otu ụdị isiokwu dị iche iche, mmekọrịta enyi na enyi, yana nzaghachi nke ebe nrụọrụ weebụ, bụ ihe Google na-enye dị arọ mgbe ọ na-abịa ịkwado saịtị weebụ. N'ihi ya, ọ dị mkpa ka onye ọ bụla na-achụ nta ego chọrọ ịbanye n'Ịntanet iji tụlee ihe ntanetị nke weebụ. Ezi saịtị nwere ike inwe ọkwa dị elu nakwa dị ka asọmpi na niche ha Source .